Miyuu SVP waayayaa? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » SIYAASADDA Miyuu SVP waayayaa?
Maalmihii dhawaa, daraasiin dad ah ayaa loo soo bandhigay sida dhaqdhaqaaqayaasha Democratic Union of Cameroon (UDC), waxay si wadajir ah uga tageen Siyaasadda oo lagu soo gebogebaynayo Dimoqraadiyada Dadweynaha Dimuqraadiga ah ee Cameroon (DPRK) ee Waaxda Waddanka, Gobolka Galbeedka.
Muuqaallo ka mid ah ayaa qabtay in la iclaamiyay dadkii ku weyn yahay dhowr tuulo oo ka mid ah degmooyinka uu ka samaysan yahay waaxda oo ay ku jiraan Marapdoum ee degmada of Malatouen at Massangam ama in Njinka ee degmada of Foumban.
Waxay ahayd xilligii booqashadii siyaasadeed ee ka socda beesha Wasiirka wasaaradda gaadiidka Zakariaou Njoya, oo ah dhaqdhaqaaqa CPDM ayaa gashay dowladda Janaayo 04 2019.
Inkasta oo mid ka mid ah su'aal weydiin karaan daacadda ah oo ka mid ah jilayaasha inta badan si qarsoodi ah, kuwaas oo mid ka mid ah xerada ka tago mid kale inta lagu guda jiro baxyada siyaasadeed ee Cameroon, ka mid ma kaa caawin kara in Midowga Dimuqraadiga ah ee Cameroon ay u muuqataa in ay la laga badiyay dhulka ee Dhallinyaro, oo ah meesha uu dhaqanku leeyahay.
Tan iyo markii ay sharciyeynta 1991, SVP marwalba waxay ku guuleysatey doorashooyinka guud ee lagu qabtay cutubkan kuwaas oo tirinaya 09 Commons iyo 05 kuraasta.
Laakiin inta lagu jiro doorashadii madaxweynaha ee 07 Oktoobar 2018, hogaamiyaha muuqaalkiisa iyo lafdhabarta, Adamou Ndam Njoya oo aan shakhsiyan u ololeynin, ayaa kaalinta labaad galay kaalinta rasmiga ah ee Paul Biya oo rasmi ah.
Waxay ahayd markii ugu horeysay ee wasiirkii hore uu ka soo degay Nuun doorashadii madaxweynenimada ee uu isagu soo bandhigay.
Si kastaba ha ahaatee, ma hubo in istiqaalada dhowaan lagu qoray UDC macnaheedu yahay in dabayshu bedelayso jihada iyo magaca ugu dhakhsaha badan ayaa dejin doona xilligii siyaasadeed ee cusub oo leh isbeddel cusub oo heer degaan ah.
Waxa hubaal ah, ka dib markii qarnigii quarter oo saldanad nolosha siyaasadeed waxaa a, UDC ayaa laga yaabaa in u muuqdaan kuwo ka mid ah neefta. Laakiin xisbiga weli aasaas adag iyo doorashooyinka soo socda oo caan ah, cod-bixiyayaasha loo ogaado waxaa laga yaabaa in ay doortaan, ma aha oo kaliya ka Xaashidda Hadhaagga ka mid ah saraakiisha xilka loo doortay, laakiin halkii ay la tixgelinayo xaaladda guud ee ka hawlgala Cameroon oo aan ku habboonayn awoodda hadda.
Marka hore, ballanqaadyada dagaalku waa in ay noqdaan kuwo adag.
Qoraal uu qoray Eric Boniface Tchouakeu
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://lewouri.info/batailles-politiques-ludc-va-t-elle-perdre-le-noun/
John of God Momo: "Waxaan leenahay 24 million dadka ... Waxaad rabtaa Paul Biya inuu shaqeeyo qof walba?"